2 Askari American ah iyo Jeneraal British ah oo lagu dilay dalka Ciraaq.
Thursday March 12, 2020 - 12:18:04 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Khasaara dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ciidamo American iyo British ah kasoo gaaray weerar ka dhacay waqooyiga magaalada Baqdaad ee caasimadda Ciraaq.
Wararka ka imaanaya Ciraaq ayaa sheegaya in ugu yaraan 2 askari American ah iyo Jeneraal howlgab Biristish ay dhinteen kadib markii sawaariikh casri ah lagu weeraray saldhig ay ciidamada Mareykanka ka sameysteen deegaanka Taaji oo qiyaastii 35Km ujira magaalada Baqdaad ee caasimadda u ah Ciraaq.
Wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa xaqiijisay in weerarkan oo ay qaadeen taageerayaasha Iiraan ee Ciraaq ay uga dhinteen 2 askari islamarkaana ay dhaawacyo kasoo gaareen 12 kale, mas'uul u hadlay xukuumadda dabadhilifka Ciraaq ayaa sheegay in sawaariikhda lagu beegsaday saldhigga Taaji qaarkood aysan qarxin islamarkaana ay baaritaanno ku hayaan.
illaa iyo hadda majirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkan khasaaraha lagu gaarsiiyay askarta reergalbeedka balse wuxuu imaanayaa xilli loollanka udhaxeeyay Mareykanka iyo Iiraan uu kusii xoogaysanayo Ciraaq.
Bandowgii saarnaa xaafadda Islii oo waqti dheeraad ah lagu daray.
Video: Maxaad ka taqaan Qabiilka HIMBA ee dalka Namibia iyo sida uu Islaamka uqaatay?